''ရှေ့ ဆက်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း မရိုးအောင် ခေတ်နဲ့လည်းညီအောင် ဖန်တီးဖို့တွေရှိပါတယ်'' ဒါရိုက်တ? - Yangon Media Group
”ရှေ့ ဆက်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း မရိုးအောင် ခေတ်နဲ့လည်းညီအောင် ဖန်တီးဖို့တွေရှိပါတယ်” ဒါရိုက်တ?
ဒါရိုက်တာကျော်ဇောလင်း (အ တွေးပုံရိပ်)က ရှေ့ဆက်ရိုက်ကူးသွား မယ့်ဇာတ်လမ်းတွေကို ပရိသတ်များ မရိုးရအောင် ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ဇာတ် တွေကိုပဲ ရိုက်ကူးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီမိုကရေစီတူဒေးကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ”ကျွန်တော်တို့ဇာတ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေမရိုးရအောင် မတူတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကို ရိုက်သွားဖို့ တွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ‘ဆယ်လီ’၊ ‘ဖက်ရှင်’ အဲဒီလိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တွေဟာလည်း မတူတဲ့ဖန်တီးမှုတွေ ကို ပရိသတ်တွေကိုပြသထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က စဉ်းစားထားတာတွေက ဇာတ်ကားဖန်တီးမှုတွေက ပရိသတ်တွေလည်းမရိုးအောင် ခေတ်နဲ့လည်းညီအောင် ဖန်တီးဖို့ တွေရှိပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
”အခုလတ်တလောမှာတော့ အောင်ပန်းမှာပဲ ကိုရန်အောင်ရယ်၊ ကိုလူမင်း၊ ကိုနေတိုးရယ် ရိုက်မှာပါ။ ဇာတ်ကတော့အက်ရှင်ဟာသပဲဖြစ်မယ်။ ‘အောင်စေပိုင်စေ’နဲ့မတူတဲ့ဇာတ်ကိုပဲ ဖန်တီးရိုက်ကူးဖြစ်မှာပါ”လို့ ဆက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆင်ဆာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကလည်း အနုပညာသမား တော်တော်များများဟာ အခုအချိန်မှာ တော်တော့်ကို အခက်တွေ့ရ ကြောင်းနဲ့ အရင်ဆင်ဆာဥပဒေတင်းကျပ်မှုများကိုသာ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပြီး လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဇာတ်လမ်းတင်တဲ့အဆင့်မှာကိုပဲ အခက်အခဲ တွေရှိနေကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
”ရုံရှင်ကားရှင်စနစ်ကတော့ ရှေ့လလောက်စမယ်လို့တော့ ကြား ပါတယ်။ ရုံရှင်တွေကလည်း ဇာတ်ကားတွေကိုတင်ပေးပါတယ်။ ရှေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကား ‘ဆယ်လီ’ ဆိုရင်လည်း ကလေးတွေကိုအခြေခံ ရိုက်ကူးထားတယ်။ သူတို့တွေက အနုပညာကိုတော့ မျှတအောင်ဇာတ်ကားတွေကိုရုံတင်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ရုံရှင်ကြိုက်ရင် တင်ရမယ်ဆိုတော့ ပရိသတ်ကြိုက်အောင်ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ပရိသတ် ကြိုက်မယ်ဆိုရင် ရုံရှင်လည်းကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်”
သမိုင်းသစ် ရေးထိုးနိုင်ဖို့ ကာဂျစ္စတန်ကို ကျော်ဖြတ်ရမယ့် မြန်မာ
မြဝတီမြို့မှ ပန်းပုလက်ရာများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ မှာယူမှုများနေ
ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး အရုဏ်ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲတွင် မြန်မာ့ရိုးရာ အကအဖွဲ့ များပြားလာ??
သထုံမြို့မဈေး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အဆိုပြုလွှာ ခေါ်ယူသည့်ကိစ္စကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှ?
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခုနစ်ခုသို့ ဖိလစ်ပိုင်မှ ဝယ်ယူထားသည့် မျိုးစိတ်နှင့် တန်ဖိုးမြ?
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနေကဇာတင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ အခမ်းအနား အောင်?
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကနဦးသုံးသပ်ချက် ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ထံ လာမည့် အပတ်တွင် တင်သွ